University of Sussex - Study in UK. Waxbarashada England
City : Falmer
gaabinta : UofS
aasaasay : 1961
Ardayda (qiyaastii.) : 14000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Sussex
Qor at University of Sussex
The University of Sussex waa hay'ad keentay sare waxbarashada iyo cilmi baarista dhow Brighton, ee koonfurta of England. Sussex ahaa kii ugu horeeyay ee la ruxruxo cusub ee jaamacadaha UK aasaasay 1960, qaata Charter ay Royal ee 1961.
cilmi baaris cusub oo deeq waxbarasho
Sussex waa jaamacad cilmi keentay, sida ka muuqata ah 2014 Research Excellence Framework (REF). In ka badan 75 boqolkiiba hawlaha cilmibaadhista ee Sussex loo asteeyey sidii dunida caan ka (4*) ama caalami ah oo heer sare (3*) marka la eego asalnimada, muhiimadda iyo qaxar.
warbixinta kooban ee Individual ee REF ah 2014 natiijada waxaa ka mid ah:
Taariikhda Sussex ahayd soo gudbinta ugu sarreeya lagu qiimeeyo Taariikhda ee UK ee tayada wax soo saarka cilmi ay
The gudbinta Sussex English ka kacay 31-in ay 9-kii ee UK oo tan iyo layliga qiimaynta cilmi ugu danbeysay ee 2008
84 boqolkiiba saameyn cilmi University ee cilmi nafsiga waxaa lagu qiimeeyo sida heerka sare uu suurto gal, 4*
Sussex Juqraafiga lahaa ugu 4* saamaynta cilmi qiimeeyo ee wax soo gudbinta Juqraafiga guud ahaan UK.
Guud ahaan, Jaamacadda waxaa kaalinta 36aad (hay'adaha multi-anshax) by GPA.
Barid iyo barasho
The University of Sussex leedahay in ka badan 14,000 ardayda, kuwaas oo in ka badan saddex meelood oo meel waa postgraduates. fikirka Creative, kala duwanaanta carruurta, tartan aqooneed iyo interdisciplinarity mar walba saldhig u ah waxbarashada Sussex a.
Hadafkayagu waa in barnaamijyo waxbaridda iyo waxbarashada waxaa loogu cilmi hadda, waa soo jiidasho leh si ay ardayda ka soo jeeda oo dhan dhaqaale iyo dhaqan, kaas oo ay samatabbixin xirfadaha nolosha.
Sussex ayaa horumariyo sumcad leh ikhtiraaca iyo waxyoonay, oo soo jiidata mufakiriintii hoggaamineed iyo cilmi. Waxaan leenahay ka badan 2,100 shaqaalaha, oo ay ku jiraan ku dhawaad 1,000 cilmiga iyo cilmi shaqaalaha, kuwaas oo, ka badan 300 waa cilmi-kaliya. Waxaan ku tirin saddex guuleysatay Nobel Prize, 14 Oo waxmatarayaal ah Society Royal, 12 Oo waxmatarayaal ah Academy British ah oo ku guuleystay ka mid ah qiimaha Crafoord Prize on our awood.
From aasaaskeedii, Sussex ayaa aragti caalami ah si ay hawlaha ay tacliinta iyo aragti. Jaamacadda ayaa soo jiidata shaqaalaha iyo ardayda si ay campus ka badan 120 dal oo kala duwan aduunka oo dhan. Ku dhowaad saddex meelood oo ka mid ah shaqaalaha ka baxsan UK iman.
Our cilmi ka qabato arrimaha ugu waaweyn ee dunida, meelaha keenta khibrad sida isbeddelka cimilada iyo cilmiga horumarinta. Jaamacadda waxay leedahay links ballaaran hay'adaha badan oo dunida ah, sida University magaalada Bekiin, National University Taiwan iyo barnaamijka Harvard-Sussex ee.
Sussex ayaa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan campus in Britain. Ku taalla Parkland rogid qarkii ee Brighton, campus ah isku daraa naqshadaha guulaystay Abaal-marinta la meelaha cagaaran oo furan. campus waxaa ku hareereysan Park Qaranka South Downs ah, laakiin oo kaliya dhowr daqiiqo ka magaalada noole ee Brighton & Hove.
Naqshada waxaa Sir Basil Spence, dhismayaasha uu ka samaysan yahay qalbiga campus la siiyey xaaladda dhismaha ku qoran 1993. Falmer House waa mid ka mid ah laba keliya dhismayaasha waxbarasho ee UK ay u noqon Fasalka waxaan ku qoran aqoonsiga ay xiiso gaar ah.
Ganacsiga iyo bulshada
Sussex leedahay caado dheer oo wadahadal kula ganacsiga iyo bulshada, taasoo socota illaa maanta marayo waxqabadyo sida Centre Innovation Sussex ee, muxaadarooyin guud iyo adeegga bulshada. Hadafkayagu waa in la caawiyo ganacsiyada iyo ururada gobolka horumariyo heerarka sare shaqaalaha xirfad tababar, iyo in ay kicin abuurnimo iyada oo la kaashanaya hay'adaha kale ee ka baxsan Sussex in ay ka faa'iideystaan ​​bulshada weynta.
Innovation Centre Sussex waxay bixisaa taageero ah ee abuurista iyo kobaca of technology- iyo shirkadaha aqoonta ku salaysan ee Sussex. Xarunta ayaa haatan waa jawi ganacsi kobcaya muddo ku dhow 80 Shirkadaha-koritaanka sare. Tan iyo markii ay Abuuridda ka badan 160 Shirkadaha ayaa ku salaysan xarunta; ay dakhli wadareed hadda in ka badan £ 250 million iyo shirkadaha hadda shaqo boqolaal dad badan oo ka mid ah dadka ku nool xaafadda.
School of Business, Maamulka iyo Dhaqaalaha
Ganacsiga iyo Maareynta
SPRU – Science Policy Unit Research
Work Social iyo Daryeelka Bulshada
School of Engineering iyo Aqbaarta
Sussex Xarunta Daraasaadka Language
School of Studies Global
Horumarinta Caalamiga ah
Xiriirka Caalamiga ah
School of History, Art Taariikhda iyo Philosophy
School of Law, Siyaasadda iyo Sociology
Kiimikada noole iyo biology kelli
Evolution, dabeecadda iyo deegaanka
dhaawac hiddawadayaasha iyo xasiloonida
School of Xisaabeed iyo Physical Sciences
Physics iyo xiddigaha
School of Media, Film oo Music
Media iyo Film
Brighton iyo Dugsiga Caafimaadka Sussex
In dadaal lagu doonayo in la dhiso jaamacad si ay ugu adeegaan Brighton, kulan caam ah oo lagu qabtay December 1911 at Pavilion Royal si uu u ogaado siyaabaha loo maal galiyo dhismaha ee jaamacad; Mashruuca la hakiyey by Dagaalkii Adduunka, iyo lacagta ka soo kiciyey waxaa loo isticmaalay halkii loogu talagalay buugaagta theMunicipal Technical College.
Fikradda ayaa waxaa soo noolaaday ee 1950 iyo, in June 1958, xukuumadda ansixiyay qorshaha shirkadaha ee jaamacad ee Brighton, in noqdo kan ugu horreeya jiil cusub oo waxa yimid in la yaqaan jaamacadaha saxan galaas. University ayaa waxaa loo aasaasay sidii shirkad in 1959, la Charter Royal ah lagu siiyo on 16 August 1961. Ururka Jaamacadda ayaa ka qarxay dhulka cusub arkay xerada qaybsan Dugsiyada of Study, ardayda ay awoodaan in ay ka faa'iideystaan ​​jawi cilmiga xirfadaha kala duwan. Sussex xooga lahaa hawlaha cross-anshax, si ardayda ah ka Jaamacada kala duwan ee asalka ama 'xaaladeed’ aqoonta ay tahay in la dhamaystiro takhasus 'core’ xirfadaha meel maado gaar ah.
Sussex yimid in la aqoonsado la isbedelka bulshada guudahaan, iyo in la horumariyo sumcad for xagjirnimada. In 1973, 500 ardayda jir ahaan hortagi taliye dowladda Maraykanka Samuel P. Huntington ka siiyo hadal on campus, ay sabab u tahay in uu ku lug lahaa dagaalkii Vietnam.
In day lagu doonayo in uu racfaan uga qaato dhagaystayaasha casri ah, jaamacadda doortay in 2004 si loo fududeeyo in ay logo ka jubbadda asalka ah ee hubka si ay haatan ku “noo” logo. Ku-xigeenka Chancellor of University ku tilmaamay aqoonsiga muuqaal cusub “Bar bilaw waayo, waxa ay noqon doontaa eegno cusub iyo dareemo Sussex ee. Waxay ku salaysan aragtida iyo qiyamka jaamacadda ee, isu war qoraal ah oo ka mid ah waxa ay rajeyneysaa in ay noqon: horseedka, hal abuur leh, caalami ah, aad u fiican, mashquuliya oo adag.”
Ma rabtaa wada hadlaan University of Sussex ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Sussex rasmiga ah Facebook
University of Sussex dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Sussex.
St George ee, University of London London
University of Surrey Luce